Fikarohana momba ny firaisana Lehilahy iray miova fo tahaka ny zazavavy tia metisy tsara tarehy: Ny trangan'ny Reincarnation an'i Jinadasa Perera | Purnima Ekanayake - Fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana
Mpikaroka: Erlendur Haraldsson, PhD
From: Nahita hazavana aho ary tonga eto, nataon'i Erlendur Haraldsson, PhD sy James G. Matlock, PhD
Ny fiainana sy ny fahafatesan'i Jinadasa Perera
Jinadasa Perera dia lehilahy iray nipetraka tany Kelaniya, faritra ambanivohitr'i Colombo any Sri Lanka. Fantatry ny Tempolin'i Kelaniya Bodista ny tanàna, izay mipetraka eo amoron'ny reniranon'i Kelani. Ny renin'i Jinadasa dia nantsoina hoe Simona ary nanana rahalahy roa sy rahavavy roa izy. Ny anabavy tanora dia antsoina hoe Violet. Nanatrika ny Sekolin'i Rahula izy ary nahavita ny kilasy fahadimy.
Tantsaha mahantra ny rainy ary i Jinadasa dia nandao ny sekoly mba hiasa hanampiana ny ankohonany. Nanao asa hafahafa izy mandra-panambadian'ny rahavaviny lehilahy iray antsoina hoe Wijisiri, izay namelom-bokatra tamin'ny famokarana emboka manitra. Nanatevin-daharana ny zaodahiny i Jinadasa avy eo nanamboatra emboka manitra. Niroborobo ny orinasam-pianakavian'izy ireo, nahatratra olona 30 isaky ny mandeha. Nanamboatra emboka manitra izy ireo tamin'ny alàlan'ny fampifangaroana lavenona arina tamina zava-manitra ary namidy ditin-kazo manitra tamin'ny alàlan'ny marika roa, Ambiga sy Geta Pichcha.
Jinadasa dia nanao fifandraisana tamin'ny rahavavin'i Wijisiri, Kusumi, izay niaina nandritra ny taona maro, na dia mbola tsy nanambady mihitsy aza izy ireo. Nifanditra izy ireo, nandao an'i Kusumi i Jinadasa ary nifindra tany atsimon'i Sri Lanka izay nahazoany sipa vaovao antsoina hoe Nanda, izay niara-nonina taminy tao amin'ny tanànan'i Weliggama. Tany no namoronany ny emboka manitra tamin'ny namanao iray antsoina hoe Somasiri.
Taorian'ny dimy taona tao Weliggama, Jinadasa dia nanao dia nankany Colombo ary tao no nahafantarany fa ny rahalahiny, Wijisiri, dia nanimba ny lohaliny izay nahatonga azy nandry. Izany no nanosika an'i Jinadasa hiverina any Kelaniya hanampiana amin'ny orinasan-tsolika Wijisiri.
Taorian'ny andro vitsivitsy taorian'izay, tamin'ny volana 1985 dia nandeha bisikileta i Jinadasa mba hivarotra emboka manitra eo an-tsena. Teny an-dalana, tao an-tanànan'i Nugegoda, nihazakazaka bisy izy ary maty avy hatrany.
Iray tamin'ireo rahalahin'i Jinadasa, Chandradasa, dia nandeha tany amin'ny tranomaizina mba hamantarana ny vatana. Chandradasa dia nahitana voka-dratsy goavana teo amin'ny vatan'i Jinadasa avy amin'ny taolam-paty havia havia sy manerana ny vatana, izay toa naterak'ireo kodiaran'ny bus. Nasehon'ny sela iray fa nisy taolam-paty maromaro nipetaka teo amin'ny ilany havia, izay nanasongadina ny havokavoka. Nopotehina ny aty sy ny kilaoty.
Jinadasa reincarnates amin'ny tovovavy
Purnima Ekanayake dia teraka tamin'ny 1987 tao amin'ny tanàna avaratr'i Sri Lankan any Bakamuna, izay 145 kilaometatra miala an'i Kelaniya. Ny marika nahaterahana malaza dia voamarika teo amin'ny ilany ankavanan'ny tratran'i Purnima. Ny rainy dia fitsipiky ny sekoly ambaratonga faharoa ary ny reniny dia mpampianatra tamin'io sekoly io.
Tahaka ny ankizy kely, Purnima dia niverimberina niteny hoe: "Ireo olona izay mitaingina olona dia olona ratsy." Nanontany ny reniny izy hoe: "Tsy heverinao ve fa olon-dratsy no mahatonga ny loza?"
Ny renin'i Purnima dia sosotra noho ny fifandonana tamin'ny fiara be moto nitranga teo akaikin'ny tranon'izy ireo. Namaly i Purnima tamin'ny filazany tamin'ny reniny hoe: “Aza mieritreritra an'ity loza ity. Tonga tany aminao aho taorian'ny loza toy izany. ” Nilaza i Purnima fa taorian'ilay loza dia nakimpiny ny masony ary tonga “eto” izy. Rehefa nanontany ny reniny raha efa notsaboina tany amin'ny hopitaly izy taorian'ny loza, dia nitantara i Purnima fa tsy nentina tany amin'ny hopitaly toy izao: Nilaza izy fa novonoin'ny “fiara lehibe” iray.
Purnima dia mitatitra ny fijerena ny fandevenana ny fiainany taloha sy ny fisiany ao amin'ny tontolon'ny fanahy eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fahaterahana indray
Purnima dia nanazava fa taorian'ilay loza dia nitsidika nandritra ny andro vitsy izy tany amin'ny toerana iray feno setroka, izay nisy olona maro hafa nivezivezy nanodidina azy. Avy tany amin'ny faritra ara-panahy izy dia nandinika ny fandevenana azy manokana izay hitan'ny olona nitomany. Dia nahita hazavana iray izy, izay nivezivezy ary tonga avy eo "eto," izay midika ho an'ny ray aman-dreniny sy ny tranony ao Bakamuna.
Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha ho mpamorona emboka
Nilaza i Purnima fa lehilahy tamin'ny fahavelony izy ary ny fianakaviany dia nanao emboka manitra, karazana emboka manitra roa manokana, Ambiga sy Geta Pichcha. (Ireo marika ireo, tsy nisy tao Bakamuna.) Ankoatr'izay, nilaza izy fa ny olona miasa any ivelany amin'ny fanaovana emboka manitra ary izy no hanara-maso ireo olona ireo. Nasehony ny fahazarany mandeha amin'ny tànany ao aoriny, mijery ny fivoaran'ny mpiasa.
Nolazainy fa teo amin'ny orinasa biriky sy ny dobo iray ny orinasa mpanao emboka manitra. Nitantara i Purnima fa manana fiaramanidina roa sy fiara ny fianakaviana. Nilaza izy fa i Simona no anaran-dreniny. Nilaza i Purnima fa nanatrika ny Sekolin'i Rahula izy, na dia hatramin'ny faha-fahadimy aza. Ireo fanambarana rehetra ireo dia marina ho an'ny fiainan'i Jinadasa.
Nilaza ihany koa i Purnima fa nanambady anabavy vavy iray izay nantsoina hoe Kusumi izy tamin'ny fiainany taloha. Nilaza koa izy fa nanana vady roa izy. Dr. Harraldsson, ao amin'ny fitantaran'ity tranga ity, dia nanazava fa any Sri Lanka tsy mpivady mariazy ny mpivady fa miara-miaina toy ny mpivady. Noho izany dia marina ireo fanambarana ireo ho an'ny fiainan'i Jinadasa.
Purnima dia manaiky ny Tempolin'i Kelaniya sy ny toerana misy ny fiainany taloha
Rehefa efa-taona i Purnima, dia nijery fandaharana amin'ny fahitalavitra tao amin'ny Tempolin'i Kelaniya ilay fianakaviana. Nilaza i Purnima fa fantany ny tempoly. Fotoana fohy taorian'izay, ny ray aman-dreniny dia nandamina fitsangatsanganana ho an'ireo mpianatra mba hitsidika ny Tempolin'i Kelaniya, izay voalaza etsy ambony, dia 145 miles avy amin'i Bakamuna. I Purnima dia nanatevin-daharana ny ray aman-dreniny tamin'ity diany ity ary indray mandeha tany amin'ny tempoly, dia nilaza tamin-dray aman-dreniny izy fa teo amin'ny fiainany taloha izy dia efa niaina tany amin'ny renirano.
Ny fahafahana nanadihady ny fahatsiarovan'i Purnima dia tamin'ny volana Janoary 1993, ny rainy dia nanakarama mpampianatra vaovao izay nandany faran'ny herinandro tao Kelaniya, raha nanambady tany izy. Nanapa-kevitra ny mpampianatra, WG Sumanasiri, ny famotopotorana ny fanambaràn'i Purnima momba ny fiainana teo ampita ny renirano avy tao amin'ny Tempolin'i Kelaniya. Ny fampahalalana nomena azy dia nahitana fa i Purnima dia lehilahy nivarotra kitapom-borona teo amin'ny bisikileta iray izay maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana nahitana fiara lehibe. Ankoatra izany, nomena ny anaran'ny emboka manitra izay namidin'io lehilahy io, indrindra fa Ambiga sy Geta Pichcha.
Ny fianakavian'i Purnima taloha dia hita
Rehefa niverina tany Kelaniya i Sumanasiri, dia nahita fa nisy mpanamboatra emboka manitra telo teo ampitan'ny renirano avy tao amin'ny tempoly. Iray amin'ireo mpamokatra, LA Wijisiri, no nanao ny marika Ambiga sy Geta Pichcha. Nianatra i Sumanasiri fa ny vadin'ny rafozan'i Wijisiri sy ny mpiara-miasa, Jinadasa Perera, dia novonoina fony izy voatifitry ny fiara fitateram-bidy raha naka emboka tamin'ny tsena tamin'ny bisikileta. Ity loza ity dia nitranga tao 1985, roa taona teo ho eo talohan'ny nahaterahan'i Purnima.
Fotoana fohy taorian'i Sumanasiri dia nampita ny zavatra hitany, i Purnima, ray aman-dreniny, Sumanasri sy ny zaodahiny dia nanao fitsidihana tsy navoaka tany amin'ny fianakaviana Wijisiri. Rehefa nanatona ny toeram-ponenany ry Purnima, dia nibitsibitsika tamin'ny reniny hoe: "Nanamboatra mpivady roa ity mpivarotra emboka manitra ity (izay milaza azy). Izany dia zava-miafina. Aza omena azy ireo ny adiresiko. Mety hanorisory ahy izy ireo. "
Ny zanakavavin'i Wijisiri dia nody ary namela ireo mpitsidika niditra tao an-trano. Tsy tao an-trano i Wijisiri tamin'io fotoana io. Fotoana fohy taorian'izay dia nandeha nankany an-trano i Wijisiri ary nilaza ny antokony i Purnima:
"Ity no Wijisiri, avy izy. Izy no rahalahiko. "
Purnima nanara-dia ny emboka manitra izay hita tao amin'ny tranon'ny Wijisiri. Avy eo dia nilaza tamin'i Wijisiri izy fa efa nivarotra ireny emboka manitra ireny izy. Nanontany izy avy eo hoe:
"Efa nanova ny fonony ivelany ve ianao?"
Wijisiri dia nanova tanteraka ny loko sy ny endriky ny fonosana isaky ny roa taona.
Nanamarika i Purnima fa naratra ny lohaliny i Wijisiri, ka tsy nahavita nanongotra azy. Nolazain'i Wijisiri fa ny tenany, toa an'i Jinadasa, dia nampihatra fanafody ho an'ny fahasimban'ny lohaliny.
Nanontany an'i Wijisiri momba ny fiainam-pianakaviana taloha i Purnima, anisan'izany i Somasiri, izay nanao emboka manitra tamin'i Jinadasa tao Weliggama, ary Padmasiri, rahalahin'i Wijisiri. Nanontany ihany koa momba ny rahavaviny taloha izy, izay nanambady an'i Wijisiri, sy ny reniny taloha. Nanamarika ihany koa izy fa ny fianakaviana Wijisiri dia manana ny tranony sy ny orinasa any amin'ny toerana hafa raha velona i Jinadasa, izay marina. Ny fahalalan'i Purnima momba ireo zava-misy ireo dia naharesy an'i Wijisiri fa izy no fananganana indray ao Jinadasa.
Nasehon'i Purnima avy eo ny anaran'ny fahaterahan'i Wijisiri ary hoy izy: "Ity no marika azoko fony aho voan'ny bus iray." Nilaza ihany koa izy fa nitranga tao Nugegoda ny loza nianjady taminy, izay marina.
Purnima dia manondro ny Rahavavy sy ny Namana iray taloha
Nandritra ity fitsidihana ity, nisy olona maromaro nijoro teo ivelan'ny trano Wijisiri, anisan'izany i Somasiri. Nahita azy i Purnima ary nilaza hoe: "Ity no namako." Rehefa nanontany azy hoe iza io olona io, dia namaly izy hoe: "Somasiri, namako." Nanondro vehivavy iray koa i Purnima ary nilaza hoe: "Ity no zandriko vavy. "Violet, anabavin'i Jinadasa, ilay vehivavy.
Purnima Mahatsiaro ny fomba fanaovana embassy
Nanontaniana i Purnima raha nahatsiaro ny fomba fanaovana emboka manitra izy. Namaly izy fa misy fomba roa. Amin'ny iray, ny dihin'ny omby dia ampiasaina ary ny iray hafa dia mampiasa alika avy amin'ny kitay. Ny pasteo dia natao avy amin'ny dihin-koba na dipoavatra entin-kana, izay ampiany fitaovana izay manome ny hanitra. Ny pastey dia ampiharina amin'ny tadin'ny volon'ondry ary mihodina, mba hamoronana emboka manitra. Notsorany fa nandritra ny fiainany taloha, nampiasa ny fomba fampiasana saribao fanaovana emboka manitra izy. Tena marina ireo fanambarana ireo.
Nanamarika ny Dr. Haraldsson fa ny renin'i Purnima dia nandre fa nampiasaina handoro emboka manitra ny dihin-dahy ary ny reniny dia tsy nahalala ny fizotry ny famokarana. Haraldsson ihany koa nanamafy fa ny fianakavian'i Purnima sy ny fianakavian'i Wijisiri dia tsy nifankahalala teo aloha talohan'ny fivoriana tao 1993.
Na dia eo aza ny fanovàna ny lahy sy vavy dia i Purnima dia Feminine
Nandinika ny tranga hafa mikasika ny fanovàna ny lahy sy ny vavy izay mety hiteraka olana amin'ny maha-lahy sy ny maha-lahy sy vavy. Ny tranga mampihetsi-po amin'ity lafiny ity dia:
Trangam-panjakan'olo-tokana an'ny miaramila japoney | Ma Tin Aung Myo
Tsy nitranga tamin'i Purnima izany, satria nankafy akanjo tsara tarehy izy, ka nilaza fa tena mendrika azy ny vehivavy.
Ny Fitsipik'izay Zandriny (anglisy)
Fiovan'ny lahy sy vavy: Jinadasa, lehilahy iray izay lasa vatana indray.
Fiainana any an-tokantrano: Navoakan'i Purnima teo amin'ny sisiny ankavia ny tratrany mifanaraka amin'ny ratra nahazo an'i Jinadasa.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Niaraka tamin'ny fianakaviany sy ny namany i Purnima.
Ny Fanahy Mitarika: Nofaritan'i Purnima ny zavatra niainany tany amin'ny faritra ara-panahy. Ny tranga iray hafa izay mitantara antsipirihany momba ny fifindrana amin'ny fahafatesana hatramin'ny fahaterahana indray dia: Ny Trangam-panjakan'ny Zafindraony ao Nai Leng | Choate
Loharano: Haraldsson, Erlendur ary Matlock, James: Nahita hazavana aho ary tonga eto, White Crow Books, 2016, pejy 3-12